musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe vafa munjodzi yechikepe cheEnglish Channel
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Kurwisa • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe vakafa munjodzi yechikepe cheEnglish Channel
Vazhinji vakatama zvisiri pamutemo vakabva kumahombekombe ekuchamhembe kweFrance kupfuura zvavaisiita kuti vatore mukana wemamiriro egungwa akadzikama neChitatu, kunyangwe mvura yaitonhora zvakanyanya.
Huwandu hwevanotama zvisiri pamutemo vanoshandisa zvikepe zvidiki kana magwa kuti vayambuke English Channel hwakakura zvakanyanya gore rino, zvisinei nenjodzi huru dzenjodzi dzinogona kuitika mugungwa.
Sekureva kwemapurisa eFrance nevakuru venzvimbo iyi, vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe vafa munjodzi yazvino, vachiedza kuyambuka English Channel kubva kuFrance kuenda kuEngland apo chikepe chavo chidiki chakanyura pamhenderekedzo yekuchamhembe. Calais, Furanzi.
Meya we Calais, Natacha Bouchart, vataura nhasi kuti huwandu hwevakafa vari kunyura hwakamira pamakumi maviri nenomwe, maminetsi mushure mekunge mumwe meya aisa nhamba pamakumi maviri nemana.
Mapurisa eFrance akati vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe vafa.
Franck Dhersin, mutevedzeri wemukuru wezvekutakurwa kwedunhu uye meya weTeteghem pamhenderekedzo yekuchamhembe kweFrance vakati huwandu hwevanhu vafa hwasvika makumi matatu nemumwe uye kuti vanhu vaviri vachiri vasipo.
The UNSangano reInternational Organisation for Migration rakadaidza chiitiko ichi kuti kurasikirwa kukuru kwehupenyu muEnglish Channel kubva pavakatanga kuunganidza data muna 2014.
Mumwe mubati wehove akadana vezvekununura pashure pokunge aona igwa risina chinhu uye vanhu vaiyangarara vasingapfakanyiki pedyo.
Zvikepe zvitatu uye matatu helikopta akaiswa kuti atore chikamu mukutsvaga, zviremera zvemuno zvakati.
Mutungamiriri weFrance Jean Castex akadana chikepe ichi kunyura "dambudziko".
"Pfungwa dzangu dziri kune vazhinji vakashaika uye vakakuvara, vakabatwa nematsotsi vanobira kutambudzika kwavo nekusuwa," akadaro tweeted.
Mutungamiri weUK, Boris Johnson akati "akakatyamadzwa uye akakatyamadzwa uye akasuwa zvakanyanya nekurasikirwa nehupenyu".
“Pfungwa dzangu netsitsi ndeavo vakawirwa nenjodzi nemhuri dzavo uye zviri muchinhu chinotyisa chavakatambura. Asi njodzi iyi inosimbisa kuti kune ngozi sei kuyambuka Channel nenzira iyi,” akawedzera.
Johnson akapika kuti hurumende yake "yaizosiya isina kuvhurika kuti iparadze bhizinesi revanotengesera vanhu nemakororo," mushure mekunge atungamira musangano wekomiti yehurumende yekukurumidzira pamayambuka.
Pakutanga neChitatu, bazi rezvemukati menyika reFrance rakati ngarava dzeFrance dzepatrol dzakawana mitumbi mishanu nevamwe vashanu vasina chavanoziva mumvura mushure mekunge mubati wehove azivisa zviremera.
Chiitiko ichi chinouya apo kusawirirana kuri kukura pakati peLondon neParis pamusoro pehuwandu hwevatorwa vanoyambuka Channel.
Huwandu hwevanoenda kunze kwenyika zvisiri pamutemo vanoshandisa zvikepe zvidiki kana magwa kuyambuka Channel hwawedzera zvakanyanya gore rino, zvisinei nenjodzi huru.
Sekureva kwevakuru veUK, vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri nezvishanu vasvika gore rino, vatove nekatatu nhamba yakanyorwa muna 25,000.
Britain yakakurudzira France kuti itore matanho akasimba kune avo vari kuedza kutora rwendo.